Published April 22, 2021 at 8:11 PM CDT
Gov. Kristi Noem wuxuu weydiisanayaa Guddiga Ciyaaraha Koonfurta Dakota inay si dhakhso leh uga noqdaan shuruudahooda ah in kaqeybgalayaasha isboortiga ay keenaan caddeyn ah inay ka tallaalan yihiin COVID-19.
Noem waxay sheegtay in codsigeedu uu hoos imanayo amarkeedii ugu dambeeyay ee fulineed ee lagu mamnuucayay baasaboorada tallaalka ee ay dawladu dejisay.
Hindisaha ay taageereen sharci-dajiyayaasha, booliska, shariifyada iyo ku xigeennada kormeerayaasha gobolka ee Nebraska waxay la kulmi doonaan isla xisaabtan ballaaran waxayna yeelan doonaan tababarro sannadle ah, iyadoo diiradda la saarayo dejinta khilaafaadka.
Senatarada waxay bixiyeen cabirka ogolaanshaha hore inkasta oo ay walaac ka qabaan qaar ka mid ah in shuruudaha ay ku adkaan doonaan hay'adaha yar yar ee sharci fulinta inay raacaan.
Codbixinta ayaa timid hal maalin kadib markii sarkaalka booliiska Minneapolis Derek Chauvin (show-vin) lagu xukumay dil iyo dil bareer ah geerida George Floyd, dhacdadaas oo dhalisay mudaharaadyo mararka qaarkood rabshado wata oo heer qaran ah, oo ay kujirto Nebraska.
Xisbi siyaasadeed oo diiradda saaray sharciyeynta marijuana ayaa hadda tartami kara musharrixiinta isla markaana sheegan kara codbixiyeyaasha ka diiwaangashan Nebraska ka dib markii ay heleen aqoonsi rasmi ah oo dawladeed. Xisbiga Marijuana ee Sharciga ah ee NOW wuxuu buuxiyey shuruudaha si uu ugu qalmo xisbi siyaasadeed. Magacaabistu waxay u oggolaaneysaa cod-bixiyeyaasha inay iska diiwaangeliyaan xisbiga, saraakiisha xisbiguna waxay u soo magacaabi karaan musharraxiinta xafiisyada xisbiyada.
Local News LocalnewsSomali
Gudoomiyaha South Dakota Kristi Noem ayaa saxiixay amar fulin ah oo mamnuucaya baasaboorada tallaalka COVID-19 ee gobolka.Noem waxay tiri tan iyo bilowgii…